मनोरञ्जन « Onlinetvnepal.com
हट अवतारमा प्रियंका चोपडाले गर्दैछिन सामुन्द्रिक किनारमा मस्ती… (फोटो सहित)
एजेन्सी- आफ्नो सुन्दर फिगरको कारण सबको मन जित्न सफल प्रियंका चोपडा र उनकी मोडल साथी एड्रिना लिमा मियामी समुद्री किनारमा एकदमै मस्ती गरिरहेको देखिएका छन् । रिपोर्ट अनुसार ‘क्वान्टिको’ की अभिनेत्री ब्राजिलियन सुन्दरीको साथ समुद्री किनारमा मस्ती गरिरहेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । प्रियंकाको यस महिनाको पहिलो हलिउड फिल्म ‘बेवाच’
बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर चाँडै बिहेको तयारीमा..,व्वाईफ्रेण्डसँग ईंगेजमेन्ट
एजेन्सी- बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर चाँडै बिहेको तयारीमा छिन् । केही महिनायता उनलाई बारम्बार आनन्द आहुजासँग देखिएको छ । उनीहरुबीच गहिरो प्रेम रहेको जो कसैले अड्कल काट्न सक्छ । यद्यपि उनीहरु दुवैले मिडियासँग यो कुरा स्वीकारेका छैनन् । पछिल्लो खबर के छ भने सोनम र आनन्द चाँडै नै ईंगेजमेन्ट गर्दैछन्
बाहुबली भन्दा पनि महंगा भए पप स्टार जस्टिन बिबर…
एजेन्सी – अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित पप स्टार जस्टिन बिबरले मुम्बईमा धमकेदार प्रस्तुती देखाए। उनको शो हेर्न ४५ हजार बढी दर्शक कन्सर्टमा पुगेका थिए। चलचित्र बाहुबली प्रदर्शन हुँदा जति चर्चा थियो त्यो भन्दा पनि बढी चर्चा भारतमा जस्टिन बिबरको भयो। उनलाई बाहुबली प्रभासको भन्दा पनि महंगो दाबी गरिएको छ। जस्टिन बिबर शो
ठ्याक्कै बाल्यकालका अक्षय कुमार जस्तै छन् उनकी छोरी
तपाई अभिनेता अक्षयकुमार र उनकी छोरी नितारालाई देखेर अचम्मित हुनुहुन्छ । छोरी निताररा हुबहु आफ्नो बाबा जस्तै छन्। हेर्नुहोस् बाल्यकालको अक्षयकुमार र उनी छोरीको तस्बिर …. अक्षयकी छोरी नितारा सन् २०१२ सेप्टेम्बर १२ मा जन्मिएकी हुन्। अक्षय कुमारले आँफु जतिसुकै काममा व्यस्त भएपनि बच्चा र परिवारका लागि समय दिन भुल्दैनन्।
रणबीरको विवाहको खबर सुनेपछि कट्रिना आक्रोशित
वैशाख २९, बलिउड अभिनेता रणबीर कपूरको कट्रिनासँग ब्रेकअप भएको दुई वर्ष भइसके पनि रणबीरको विवाहको खबर कट्रिनाकोमा पुगेपछि उनी आक्रोशित बनेकी छन् । कट्रिनाले आफ्नो म्यानेजरसँग भनेकी थिइन् कि अब रणबीरको कुनै पनि फिल्ममा काम गर्दिनँ । हालका दिनमा रणबीर कपूरले मागी विवाह गर्न लागेको खबर बाहिर आएको छ ।
“इन्टु मिन्टु लण्डनमा”को निर्माण घोषणा, साम्राज्ञीकी हिरो को ?
चलचित्र “इन्टु मिन्टु लण्डनमा” को शुक्रवार औपचारिक रुपमा निर्माण घोषणा गरिएको छ । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको लिड रोल रहने चलचित्रमा धिरज मगर, विवेक लिम्बू, शारुक ताम्राकार, सुनिशा बजगाइँ लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भूमिका रहनेछ । यस चलचित्रको छायांकन काठमाडौं र यूकेमा हुने यसका निर्माणपक्षले बताए । यो चलचित्रमा साम्राज्ञी “मिन्टु” र धिरज ‘इन्टु’ को
सकियो प्रियंकाको “कथा काठमाण्डु”…,२३ दिनमै चलचित्रको छायाँकन सकियो
चलचित्र “कथा काठमाण्डु”को छायाँकन सकिएको छ । २३ दिनमै चलचित्रको छायाँकन सकिएको हो । मंगलबारबाट चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन सकिएको यसका निर्देशक संगीता श्रेष्ठले बताइन् । यस चलचित्रमा प्रियंका कार्की, आयुष्मान देसराज जोशी, संजोग कोइराला, सन्ध्या केसी, प्रेक्षा अधिकारी, प्रमोद अग्रहरी लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ । आहाना फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको
३ खानले टक्कर दिए ‘बाहुवली’का प्रभासलाई
वैशाख २९ – बाहुबली र बाहुबली-२ को सफलता पछि चलचित्रका निर्माताहरुको बैंक ब्यालेन्समा सयौँ करोड थपिएको छ । चलचित्रले प्रभासको क्रेज ह्वातै बदाई दियो । प्रभासको नाम बलिउडमा मात्र नभएर कलिउड र हलिउडमा पनि लिन थालीसकेका छन् । चलचत्रिका सदस्य तथा कलाकारहरुले आगामी चलचित्रको लागि आफ्नो पारिश्रमिकमा बृद्धि गरेका छन्
५ वटा असफल अफेयरपछि मागी विवाह गर्दै रणवीर…,कट्रिनासँग किन गरे ब्रेकअप ?
एजेन्सी– वलिउड अभिनेता रणवीर कपुर चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी छ, रणवीरको विवाह लण्डनमा रहेका एक नामी परिवारको सदस्यसँग हुँदैछ । उनको मागी विवाह हुन लागेको अनलाइनको दाबी छ । उनीहरुलाई भेट्न रणवीरकी आमा नितु सिंह लण्डन समेत पुगेकी थिइन् । तर, यसबारेमा नितु वा रणवीरले
एकअर्काकालाई दुश्मन मानिने रेखा र आर्यन एउटै फिल्ममा…(हेर्नुस् भिडियो)
सात वर्षपछि रेखा थापा र आर्यन सिग्देल सँगै पर्दामा देखिने भएका छन् । रेखा फिल्मसबाट बन्ने नयाँ चलचित्र “रुद्रप्रिया”मा रेखाको अपोजिटमा आर्यन पक्का भएका हुन् । बुधबार रेखा फिल्मसको कार्यालय बालुबाटारमा आर्यन उपस्थित थिए । यसलाई सबैले सुखद मिलनको रुपमा लिनु होला’ आर्यनसँग हात मिलाउँदै रेखाले भनिन् । करिब सात